ရောင်းဝယ်ရန် အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်ရပ်များ
ရောင်းဝယ်သူတိုင်း စီးပွားရေးဒေတာဟာ Forex ဈေးကွက်မှာ ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သိပါတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ ရောင်းဝယ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာရန် စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းတွေနဲ့ Forex သတင်းတွေကို လိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနည်းနဲ့ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေနိုင်ပြီး၊ ငွေကြေးတွေရဲ့ ရွေ့လျှားမှုကို သဲလွန်စရနိုင်ပါတယ်။
စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်တွင် စီးပွားရေးဒေတာ ထုတ်ပြန်ချက်အားလုံ စုစည်းထားပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသော စီးပွားရေးအညွှန်းကိန်းတွေရှိပြီး၊ သင်သည် ရောင်းဝယ်သူအသစ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုစကြည့်ရမလဲ သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်မပူပါနဲ့! ငွေကြေးအတွဲတွေရဲ့ အပြုအမူကို ခန့်မှန်းရန် သင်ကျိမ်းသေလိုက်နာရမည့် သိသာထင်ရှာဆုံး ဖြစ်ရပ်တွေကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဗဟိုဘဏ်အစည်းအဝေးတွေနဲ့စတင်ရန် ပေးထားပါတယ်။ အစည်းအဝေးတွေဟာ ဗဟိုဘဏ်က အတိုးနှုန်းကြေငြာသောကြောင့် အရေးကြီးရုံသာမက၊ အနာဂတ် ငွေကြေးမူဝါဒအပေါ် သဲလွန်စလည်းပေးပါတယ်။
အတိုးနှုန်း တိုးလာခြင်းသည် ငွေကြေးလဲ တက်လာမည်ဟုယူဆလို့ရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျဆင်းလာမှုသည်အကျ၊ ဆိုလိုသည်မှာ မကောင်းတဲ့သင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ်က အတိုးနှုန်းမပြောင်းဘူးဆိုရင် ဈေးကွက်ခန့်မှန်းခြေပေါ်မူတည်ပြီး အတက်ကော၊ အကျကော ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစည်းအဝေးတွင်၊ ဗဟိုဘဏ်မှ ယင်း၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် သုံးသပ်ချက်ကို မကြာခဏဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဘဏ်က ဒါတွေဟာ အားပေးနေတယ်လို့ထင်ရင် ရောင်းဝယ်သူတွေသည် အနာဂတ်ဈေးနှုန်းမြင့်ပြီး၊ ရလဒ်အနေနဲ့ အားကောင်းတဲ့ငွေကြေးဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အနေဖြင့် အားနည်းတဲ့ စီးပွားရေးသုံးသပ်ချက်သည် ရောင်းဝယ်သူကို ငွေကြေးရောင်းချစေပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင် အတိုးနှုန်းနှင့် စီးပွားရေးသုံးသပ်ချက်နှစ်ခုလုံးကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်၏ အစည်းအဝေးနှင့် ငွေကြေး၏ ရွေ့လျှားမှုကြားက ဆက်နွယ်မှု သာဓကတစ်ခုကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
မေ ၁၀၊ ၂၀၁၈တွင် နယူးဇီလန်ဗဟိုဘဏ်သည် အတိုးနှုန်းကို ထိန်းထားပါသည်။ ယင်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် ငွေကြေးကို ဈေးကွက်က အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာလောက် သက်ရောက်မှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဗဟိုဘဏ်၏ မိန့်ခွန်းကတော့ - ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပစ်မှတ်သည် ကျလာခဲ့ပြီး လက်ရှိဖောင်းပွမှုသုံးသပ်ချက်သည် အနုတ်သဘောဆောင်နေပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် နယူးဇီလန် ဒေါ်လာသည် USDကို ဆန့်ကျင်ပြီး အတော်ကျသွားခဲ့သည်။
စီးပွားရေး အညွှန်းကိန်းတွေအကြောင်း သွားရအောင်။
GDP ။ GDP (သို့) စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ကို တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ၏ အရေးအကြီးဆုံးအညွှန်းကိန်းနှင့် စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှု၏ အကျယ်ပြန့်ဆုံး အတိုင်းအတာလို့ခေါ်နိုင်ပါသည်။ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးများစွာတွင် GDP ထုတ်ပြန်မှု၏ - အဆင့်မြင့်၊ အစမ်း နှင့် နောက်ဆုံးဆိုပြီး အသွင်သုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာ ဘာမှမထိုက်တန်ပါဘူး။ အဆင့်မြင့် GDPက ဈေးကွက်ကို အလှုပ်ဆုံးပါပဲ။
GDP ကြီးထွားမှု တိုးလာခြင်းသည် ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်း တုိးမြင့်မှုကို ဦးတည်စေပါသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် GDP ဒေတာသည် ကြိုတင်မှန်းထားတာထက် အားနည်းနေရင်၊ ငွေကြေးကျဆင်းပါမည်။
CPI။ CPI (သို့) စားသုံးသူဈေးနှုန်း အညွှန်းကိန်းသည် ဈေးကွက်ကုန်စည်များအတွက် စားသုံးသူများမှပေးချေတဲ့ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ဤအညွှန်းကိန်းပြောင်းလဲမှုသည် ဖောင်းပွမှုနှင့် ဖောင်းပွမှုလျော့နည်းလာမှု ကာလတွေကို သတ်မှတ်ပေးပါသည်။ ဒါ့အပြင် ဒေတာသည် အစိုးရ၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ ဘယ်လောက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာ ဖော်ပြပါသည်။ CPI နှစ်မျိုး: တစ်ချိန်တည်းမှာ ထုတ်ဝေတဲ့ CPI နှင့် အချက်အချာ CPI (မတည်ငြိမ်သော စွမ်းအင်နှင့် စားနပ်ရိက္ခာဈေးနှုန်းများ ချန်လှပ်ထားသည်)ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။ ရောင်းဝယ်သူများသည် CPI ဒေတာကို အထူးအာရုံစိုက်ကြသည်။
ဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်းသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုပေါ်မူတည်နေတာ သိပြီးဖြစ်သည်။ ဒါဟာ ဗဟိုဘဏ်က CPI ထုတ်ပြန်ချက်တွေကို အထူးအာရုံစိုက်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ CPI တိုးတက်လာမှုသည် နိုင်ငံ၏ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ပစ်မှတ် (သို့) ပိုမြင့်သော၊ ဗဟိုဘဏ်သည် ယင်း၏ နှုန်းကို မြင့်သယောင်ရှိပြီး၊ ငွေကြေးလည်း တက်လာပါလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့် ငွေကြေးတန်ဖိုးလျော့ကျလာမည်။
PMI။ GDP အကြောင်းပြောခဲ့သလိုပဲ PMI ကိုလဲဖော်ပြရတာတန်ပါသည်။ PMI (သို့) ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းသည် ထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို တိုင်းတာတဲ့ဟာဖြစ်ပါသည်။ အညွှန်းကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် သုံးသပ်သူများ၊ ဝယ်ယူရေး မန်နေဂျာများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူများ ကို လက်ရှိစီးပွားရေး အခြေအနေများအကြောင်း သတင်းအချက်လက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဒါကို GDP တိုးတက်မှု (သို့) ကျဆင်းမှု၏ ဦးဆေင်တဲ့ အညွှန်းကိန်းအနေနဲ့သုံးပါသည်။ ပြီးတော့ ဗဟိုဘဏ်များက ငွေကြေးမူဝါဒ တွက်ချက်ရာတွင် ဤဒေတာများကို အသုံးပြုပါသည်။
ပေးထားတဲ့နိုင်ငံမှာ PMI ကျဆင်းသွားရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများက ဗဟိုဘဏ်၏ dovish ခံစားချက်ကို မျှော်လင့်ပါမည်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံ၏ ရှယ်ယာဈေးကွက်ကို သူတို့၏ဖော်ထုတ်မှုလျှော့ချပြီး၊ PMI ဖတ်ခြင်းနဲ့အတူ တခြားနိုင်ငံများ၏ ရှယ်ယာတန်ဖိုး ကို မြင့်တင်ပါသည်။
NFP။ NFP (သို့) လယ်ယာမဟုတ်သော လုပ်ခလစာသည် ပြီးခဲ့တဲ့လများအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်ခန့်တဲ့ဦးရေးအပြောင်းအလဲကို ဖော်ပြထားသော စီးပွာေးရးအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပေမယ့် စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍကို ဖယ်ထားခဲ့သည်။ အညွှန်းကိန်းသည် စီးပွားရေး လှုပ်ရှားမှုအားလုံး၏ အဓိကကို တွက်ချက်ပေးတဲ့ စားသုံးသူ သုံးဆွဲမှုအပေါ် သဲလွန်စပေးတဲ့အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ မြင့်လာတဲ့ NFP သင်္ကေတများသည် ပိုကောင်းမွန်ပြီး ပိုကောင်းတဲံ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။ နိမ့်လာတဲ့ NFP အမှတ်များသည် အားနည်းတဲ့စီးပွားရေးမှာဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ကျဆင်းမည်။ လတစ်လ၏ ပထမဆုံး သောကြာနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ USDသည် လူကြိုက်များတဲံ ငွေကြေးအတွဲများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်အတွက် Forexဈေးကွက်မှာ ကြီးမားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ဖြစ်စေသည်။
လစာစာရင်း၏ အမှန်တကယ်ကိန်းဂဏန်းသည် မှန်းထားခဲ့တာနှင့်တူရင် USD ရွေ့လျှားမှုသည် အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနှင့် ပျမ်းမျှအချိန်အလိုက် ဝင်ငွေများကဲ့သို အပိုဆောင်းဒေတာတွေပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်းက ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတိုင်းတာချက်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်၏ မူဝါဒကို သက်ရောက်မှုကြီးရှိသောကြောင့် ယင်းအခန်းကဏ္ဍသည် ပိုပိုပြီး အရေးကြီးလာပါသည်။
သင့်အမြတ်ကို မြှင့်တင်မည့်အခွင့်အရေးကို ပေးမည့် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ရပ်များကို ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်၏ ဖြစ်ရပ်များနှင့် ဈေးကွက်ရွေ့လျှားမှုများ ကိုလိုက်နာပြီး၊ ဤဖြစ်ရပ်များပေါ် အခြေခံကာ ကိုယ်ပိုင်အရောင်းအဝယ် ဗျူဟာတည်ဆောက်ပြီး ဝင်ငွေများရှာပါ!
ဖြစ်ထွန်းမှု စီးပွားရေး ငွေကြေးဖောင်းပွမှု